Ardayda Gaarka ah - ITS Tech School
ITIL Maamulida Guud ee Lifecycle
Shaqaalaha taageerada Gr8 Tababaraha wuxuu leeyahay xirfad fiican oo ku jirta ITEM. Tayada cuntada ugu fiican. Guud ahaan tababarka guud ee wanaagsan
Hawlgalka Adeegga Dhexe ee ITIL
Waxay ahayd tababar cajiib ah oo leh tababaraha cajiibka ah iyo jawiga waxbarasho. Way fiicnayd in la ogaado sida ururradu u shaqeeyaan gudaha iyo geeddi-socodka isdhexgalka. Intaa waxaa dheer Tababaruhu wuxuu ahaa mid aqoon badan u leh inuu sharxay wax kasta oo aad u dulqaadan leh iyo tusaalooyin wax ku ool ah oo iga caawiyey in aan fahmo mid kasta iyo wax walba si fudud. Marnaba uma maleynayo in ay noqon doonto waayo-aragnimo cajiib ah laakiin waxaan qorsheynayaa inaan ka dhigno caddayntayda halkan oo kaliya. Cheers iyo dhammaanba ugu fiican qof walba.
Waxay ahayd kulan xiiso badan. Waxaan rajeynayaa in aan kulanno badan oo kuwan oo kale ah la mid ah wareegyada kale ee nolosha, ay jeclaan lahaayeen inay ka qaybgalaan oo bartaan.
Waa hay'ad weyn oo leh shaqaale tayo leh iyo dhammaanba Infra-ni loo baahan yahay. Aasaasidda ITIL ee isku daygii ugu horreeyay ee calaamadaha wanaagsan.
Kugula talin dhammaanba inaad ku soo biirto tan shahaadadooda.
ITIL - Naqshadda Adeegga Dhexe
Waxaan aasaasay aasaaska iyo isgaadhsiinta ITIL ee ITS tech in bishii hore lafteeda. Waxaan helay Maareeyaha Ganacsiga Mr Sandeep iyo tababaraha si aad waxtar u leh si ay u fahmaan geeddi-socodka dhamaystiran iyo xitaa waxay ku caawinayaan inay keenaan mustaqbalka mustaqbalka ee musharraxiinta. Waan ku mahadsanahay labadoodaba waxaanan raadsanayaa isla wadashaqeyn intii lagu jiray koorsooyinkayga xiga ee leh ITSTECHSCHOOL
Xirfad-wanaagga ayaa si fiican u soo bandhigay ururkaaga iyo dhammaan ballan-qaadyada la ballanqaaday ayaa si habboon loo ilaalin lahaa.
Waxay ahayd farxad dhab ah in Chikanna yahay macallinkayaga Selenium. Guud ahaan maadada wanaagsan ee koorsada iyo macallimiintu khibrad u leh mawduuca waxay ka dhigeen mid aad u xiiso badan oo xiiso leh.
Tababaruhu wuxuu ahaa mid xirfad leh oo aqoon leh, wuxuu sharaxay mowduucyada si faahfaahsan ugana nadiifiyey inta badan su'aalaheena
Guud ahaan wuxuu ahaa tababar wanaagsan